Munguva yangu SEO tsika, ndinowanzoona kuti vatengesi vemuIndaneti vanowanzovaka bhizinesi ravo paGoogle. Zvisinei, haisi iyo huru yekutsvaga injini yemiti. Zvinonyanya kukosha kutenga zvigadzirwa zvekutengesa kuAmazambique sezviri maererano nehuwandu hwemashoko, vanopfuura 65% yevashandisi vanotsvaga ku Amazon kutsvaga kuwana chigadziro chavanoda. Inogona kutsanangurwa nemarudzi akawanda Amazon mazano akadai sekukwanisa kuenzanisa mitengo uye kusarudza yakanakisisa; kuonana nevatengesi; chengorora mhinduro, nezvimwewo - wicking subtank mini v2 build. Zvisinei, chimwe chezvinyanyokosha zvikuru ndezvokuti vashandi vanogona kuona ruzivo rwezvechigadzirwa pane imwe peji.
Kune musiyano mukuru pakati peAmazon neGoogle kutsvaga mapurisa zvikuru nekuda kwezvinangwa zvakasiyana zvezvikwata izvi. Google yakanga yakagadzirirwa kutengesa zviziviso. Mazuva ano, Google Adwords ndiyo nyanzvi yeGoogle pfuma. Munguva yaro, Amazon yakanga yakagadzirirwa kutengesa zvigadzirwa. Izvo zvinoumba mutsauko wakakosha mumatauriro ehumwe kubudirira.
Google inopa vashandisi nemhinduro pakarepo kumibvunzo yavo. Kunyange zvazvo Amazon iri kubudirira kana iwe uchiwana chigadziro chaunoda pamutengo unonyanya kukosha pamusika. Amazon inowana rubatsiro kubva kune imwe neimwe yebhizimisi. Ndokusaka inopa vashandisi nemigumisiro yakanakisisa yemigumisiro. Amazon maitiro nemari kana mari yakakura pakutsvaga kwega.
Pakuvandudza kweGoogle, iwe unonyanya kuratidza kushandiswa komubatsiro nekushanda kunze kwezvitendero zvinhu. Paunenge uchigadzirisa nzvimbo yako kuAmazon, unofanirwa kuisa pfungwa pakuvandudza kutendeuka kwehuwandu. High kutendeuka kwakaenzana nemari yakawanda muAmazon. Iwe unoda kutonga maAmerica chikwata chinoshandiswa nhepfenyuro kuti uwedzere kutengesa kwako uye kukoshesa vamwe vangave vatengi.
Regai tikurukure kuti maBhuku eAmerica anogadzirwa sei. Idzi ruzivo ruchakubatsira iwe kuvaka chikwata chekugadzirisa kuAmazon.
Amazon result page page mechanism
Mapeji emubhadharo ema Amazon anokwanisa kuva nehutano hwakasiyana-siyana zvichienderana nemhando ipi yemibvunzo inowanikwa mubhokisi rekutsvaga. Amazon SERP ine mharidzo miviri - urongwa hwekutsvaga kutsvaga mumadhipatimendi ose uye maonero emagetsi kana iwe uchitsvaga mune chimwe chigadzirwa chechikwata.
Zvikamu zvinonyanya kukosha zveAmerica mhando yekunyoresa mazita ndeye minda yekuisa mubhokisi rezasi. Izvi zvinoshandiswa kutsvaga mitsva yekutsvaga uye kupa vashandisi zvinhu zvakanakisisa zvakagadzirwa. Ichi ndicho chikonzero chinokosha nei zvichikosha zvikuru kuzadza minda yakawanda sezvinobvira apo iwe unogadzira peji yako yemagetsi kuAmazon.
Kunyatsoteerera kunofanira kubhadharwa kune zvikwereti zvakabhadharwa zvinowanikwa pasi pekutsvaga peji rekutsvaga. Amazon inobhadhara pikicha pekutsvaga inoshandisa zvakafanana neGoogle. Iwe unofanirwa kubhadhara mumwe nomumwe wekutsvaga komudhi pane ad yako.
Amazon ranking mamiriro
Zvose zvinoshandiswa zvakakosha zvinokonzerwa zvinogona kugoverwa mukushanda zvinhu uye zvakakosha.
Kuita zvinhu zvinoshandiswa pakuvandudza zvikwereti kuburikidza nekuratidzira Amazon kuti inogona kuwana purogiramu yakawanda nekuisa chigadzirwa chakakwirira pane peji yemhinduro.
Kukosha kwezvinhu kunobatsira kuratidza Amazon kuti chigadzirwa chakakosha kumubvunzo wemushandisi.
Kugadzirisa zvinhu zvinosanganisira kutendeuka kwehuwandu, mifananidzo yemhando, uye mutemo wekutengesa.
Kukosha kwezvinhu zvinosanganisira musoro uye tsanangudzo yekugadzirisa, kuisa marimi, kuburitsa mabhota uye kutsvaga zvido zvakakosha.